Home Wararka NISA oo ka war bixisay xaaladda Roobow
NISA oo ka war bixisay xaaladda Roobow
Ku simaha taliyaha Hey’adda NISA Yaasin Cabdullaahi Farey aya si deg deg ah uga soo jawaabay warbixintii uu ka codsaday wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ee ku saabsaneyd xaaladda Mukhtaar Roobow.
ku simaha Taliyaha Hey’adda NISA ayaa sheegay in xaaladda Caafimaad ee Mukhtaar Roobow ay tahay mid fiican isla markaasna wuxuu tilmaamay inuu dagan yahay guri ay si weyn u ilaaliyaan Ciidamada Dowladda.
Wuxuu kaloo sheegay in qoyskiisa ay si joogto ah usoo booqdaan isla markaasna uu leeyahay dhakhtar si joogto ah ula socdo xaaladiisa Caafimaad.
Ugu dambeyntii Taliyaha ayaa sheegay in sababta uu Roobow u xiran yahay inay tahay maadaama uu kamid ahaa xubnaha Al-Shabaab isla markaasna uusan buuxin shuruudaha looga baahnaa dadka kasoo baxaya kooxdaas ee isku soo dhiibayo Dowladda.
Previous articleMucaaradka qaarkood oo diiday la-kulanka Qoor Qoor iyo olole ka dhan ah oo ka billowday Galmudug
Next articleFaroole, Gaas iyo Cumar Cabdirashiid oo maanta ku wajahan Boosaaso
(Akhriso) War murtiyeed hordhac ee IGAD oo aan lagu soo hadal...
Meydad hor leh oo laga helay goobtii uu qaraxa ka dhacay...